UMFAZI ONEMINYAKA ENGAMA-72 UBUDALA OYE WAZALA IZIPHAKAMISO EZINGAMA-42 EKUGQIBELENI UPHAKAMISA UMBUZO - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Umfazi oneminyaka engama-72 ubudala oye wala Izindululo ezingama-42 zoMtshato
Ngu: Joyce Chen 03/04/2019 kwi-4: 46 PM
Obu bubungqina bokuba ukuzingisa kunomvuzo. Kule minyaka ingamashumi amane idlulileyo, UColin Jones , 74, ebebuza iqabane lakhe elide, UPauline Young , 72, ukutshata naye. Ngaphandle kokungaphumeleli, u-Young uhlala enqaba izindululo zakhe, nangona esi sibini besithandana ukusukela ngo-1976 kwaye sabelana ngabantwana abahlanu phakathi kwabo kwimitshato yabo yangaphambili.
Iibhanti zothando ezide kwaye zisebenzile kwaye zahlala kunye ukusukela oko baqala ukuthandana emva kokudibana kwindawo yokudlala abantwana babo ababekhe baya kuyo, ke akucaci ukuba kutheni abaTsha beyichasa imbono yoMtshato Ongcwele ixesha elide. Ekupheleni konyaka ophelileyo, nangona kunjalo, iimeko zobomi zabangela ukuba uMncinci atshintshe intliziyo, waguqula iitafile wacebisa uJones.
Xa uPauline wandibuza, ndaphantsa ukuwa ebhedini, uJones uxelelwe Yahoo! Iindaba . Kudala ndimbuza ngalo lonke elixesha ngoku ebendibuza, ndathi, ‘Ewe ndizakwenza njalo. Ndacinga ukuba ayisoze yenzeke.
Kule minyaka ingama-30 idlulileyo, uJones no-Young baqhuba ishishini lokwenza ikhabinethi ngokubizwa ngokuba yi-Young Jones, ese-Powys, Wales. Kutshanje bafudukele eGozo, Malta, malunga neminyaka eli-14 eyadlulayo, ukulungiselela indawo yokulala kunye nesidlo sakusasa kunye.
Intlungu yehla, nangona kunjalo, xa u-Young kwafunyaniswa ukuba unengxaki ye-neurological ebizwa ngokuba yi-corticobasal degeneration kwaye kwafuneka afudukele kwikhaya lononophelo eTelford, eNgilane. Ukuwohloka kweCorticobasal kukhokelela ekuhambeni kancinci kunye nokungcangcazela ngaphakathi kwabo bachaphazelekayo. Ngenxa yoko, esi sibini sihlale sodwa kule minyaka mithathu idlulileyo, kunye noJones abahlala ngasemva eMalta ukuba balale ebhedini nakwisidlo sakusasa. Utyelela uYoung qho kwiiveki ezimbini.
Abantu bathi baneminyaka ndawonye kodwa enyanisweni banalo mhlawumbi iyure ngaphambi komsebenzi kwaye emva koko bayabonana ngokuhlwa-sasisoloko sikunye, utshilo uJones. Xa sabona omnye nomnye kungoko nangoko, sathandana-ikhonkco, umgca kunye nesinki. Umlingo wobomi ukuvumela ukuba udibane nabantu abanjengoPauline.
Ngexesha lokundwendwela kwakhe ukuya kubona uLutsha kulo Disemba uphelileyo, wothusa uJones ngesindululo. Ngokuqinisekileyo wathi ewe, kwaye esi sibini satshata ngoSuku lweValentine kumsitho wentsikelelo (ongagunyaziswanga ngokusemthethweni njengomtshato) eSt George's Methodist Church eTelford. Bobabini uJones noJoung banxiba ezona mpahla zabo zintle kwaye isitulo esinamavili sikaYoung sasihonjiswe ngeentyatyambo zomsitho.
Yayingumxube wenene weemvakalelo: Ndothuka, ndandinexhala, utshilo uJones. Kodwa ngokuthe ngcembe sasebenza ngayo kwaye ngoku silapha. Le nkonzo yayingumsitho wentsikelelo, kodwa ngokokutsho kwethu ngumtshato, kukubonisa uthando. … Umtshato wethu wawuyindibaniselwano yeminyaka engama-43 sikunye.
Khuphela ixesha elide , usetyenziso olunceda ukwakha imitshato esempilweni neyonwabisayo.
izipho zekrisimesi zomfazi
Ipeyinti yangaphakathi igqityiwe
ukukhanya kweekhabhinethi zekhitshi ezikhanyayo
yintoni mfutshane mfutshane
Isipho sokukhumbula iminyaka emi-3
iinwele ezilula ukuzenzela umtshato